घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू सेनेगालिस फुटबल खेलाडीहरू बोले दीया बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो बुले दीया बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार (+ ब्रदर्स), प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा, यो पूर्ण इतिहास हो एक समय इलेक्ट्रीशियन जसले पछि लिग १ लाई विद्युतीकरण गर्न थाले लक्ष्य संग। हामी बाल्यकालदेखि सुरु भयो जब उहाँ प्रख्यात हुनुभयो। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ भेट्नुहोस्, उसको जीवनको सारको सार - स्पष्ट सारांश बोले दीआको बायो।
बोले Dia को पूर्ण जीवनी।
हो, धेरै फुटबल फ्यानहरूले मात्र उहाँलाई २०२०/२०११ मा चिनेका थिए - केवल त्यतिखेर जब उनको नाम गोल स्कोरिंग मेशिनको रूपमा लोकप्रिय भयो। यद्यपि केवल थोरै फ्यानहरूलाई जीवनको कथा थाहा छ। हामीले यसलाई तयार गर्न हाम्रो समय लिएका छौं - फुटबलको प्रेमको लागि। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
बुउले दीया बचपन कहानी:
बुले दीया नोभेम्बर १ 16 1996 November को नोभेम्बर १ XNUMX को दिन ओयोनाक्समा जन्मेका थिए, जुन पूर्वी फ्रान्सको औवरग्ने-रन्ने-आल्प्स क्षेत्रको दोस्रो सबैभन्दा जनसंख्या कम्यून हो। फ्रान्सेली फुटबलर उसको परिवारको अन्तिम जन्मेको बच्चा हो। ऊ सबैभन्दा कान्छो छोरा (सबै केटाहरू) आफ्ना आमा बुबाको बीच मिलनबाट जन्मेको हो।
रेम्स स्ट्राइकर ओयोनाक्सको औद्योगिक उपत्यकामा उसको ठूला भाइहरूसँग हुर्केका थिए। बाँया देखि दाँया, ती समावेश गर्दछ; Harouna, बोलाई (हाम्रो ध्यान), Abou र Diak। भाइहरू बीचको बन्धनको कुनै सीमा छैन। सुरुदेखि नै सबै केटाहरूले एक अर्कालाई मुटुले चिन्छन्। उनीहरू आफ्नो जन्म दिनदेखि एकतामा छन्।
यहाँ भाइहरू छन्; Harouna (टाढा बायाँ), Boolaye (हाम्रो मानिस), Abou (दायाँ) र Diak (टाढा दायाँ)
बोले दीया परिवार पृष्ठभूमि:
फुटबलर एक गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदछ। अनुसन्धानमा यो छ कि बुले दीयाका बुबा सेनेगलमा एमेच्योर फुटबलरको रूपमा खेल्छन्। यो उनको भागेको देश फ्रान्समा हुनु अघि नै थियो - अझ राम्रो जीवन यापनको लागि। बुलेलीका जेठा भाई हारौनाका अनुसार उनका बुवा कहिल्यै प्रोफेशनल बन्न चाहनुहुन्न।
उनको बुले दीयाको बाल्यकालका दिन, उसको परिवारका सदस्यहरूले एउटा सानो अपार्टमेन्ट साझा गरे जहाँ उनीहरूले बैठक कोठाको खाली स्थान बनाए। सबै चार भाइहरूले एउटा सानो बेडरूममा साझा गरेको तथ्यले उनको बुबा र आमाले दर्शाउँछ कि धनी थिएनन्।
बुउले दीया परिवार मूल:
जे होस् फ्रान्समा जन्मिए पनि धेरै प्रशंसकहरू सचेत छन् कि दीया सेनेगाली मूलको हो। यद्यपि, के कम थाहा छ ओयोनाक्स हो, यो शहर उनको आमाले उसलाई पाउनु भएको थियो।
माथिको नक्शाबाट हेर्दा, कम्युन केवल १ घण्टा १० मिनेट (.1 10.० किमी) जेनेभा, स्विजरल्याण्डबाट टाढा छ। साथै, फ्रान्सेली लियोन ओयोनाक्सको नजिकै छ - १ घण्टा १ min मिनेट ड्राइभ (.88.0 .1 .० किमी)। ओयोनाक्स फ्रान्सको पूर्वमा एक औद्योगिक शहर हो।
अनुसन्धानमा यो छ कि सानो छँदा, उनको बुबा र आमाले खेल जस्ता महत्वहीन चीजहरूको लागि आधारभूत शिक्षामा सम्झौता गरेको हेर्न चाहनुहुन्न भन्ने धारणा थियो। यस कारणले, फुटबल माध्यमिक भयो। त्यहाँ डिआ स्कूल जानको कुनै रेकर्ड छैन, तर हामीलाई थाहा छ कि उसले केही प्रकारको टेक्निकल शिक्षा पाएको थियो।
बुले दीया अनटोल्ड फुटबल कहानी:
सुरुबाट, त्यहाँ फुटबलमा प्रो बनाउनको लागि क्वेस्ट जस्तो कुनै चीजहरू थिएनन्। बच्चाको रूपमा समेत उनका ठूला दाजुहरू मात्र फुटबलमा संलग्न हुन्छन्। फुटबल क्यारियर असफल भएको बुबालाई देखेर डराउँदा जोखिमबाट केटाहरूलाई सचेत गरायो।
जहाँसम्म, फुटबल मा एक पेशेवर बन्ने नियत एक सही तरीका बाट आयो। एक पटकको लागि, भाग्य बुलेट Dia को परिवार मा पतन भयो किनकि उनीहरू-खेलाडीको प्रतिस्पर्धा खेल्न छनौट भए। हामी यसलाई Oyonnax पड़ोसी टूर्नामेंटको रूपमा सन्दर्भ गर्दछौं।
जब परिवारका सबै सदस्यहरू यस कुरामा सहमत थिए, बुलेलीका बुबाले इन्कार गर्नुभयो। Harouna अनुसार उसको जेठो दाइ;
“हाम्रा बुबा त्यसमा सहभागी हुन उत्सुक हुनुहुन्नथ्यो। हामीले उसलाई अलि जबरजस्ती गर्यौं। सडकमा हुँदा उनले यसको बारेमा सोचे र विचारलाई अस्वीकार गरे। ऊ घबरायो र फर्कियो। ”
यसमा धेरै कुरा गरिसकेपछि, बोलेको बुबा र उनका चारजना भाइहरू मैदानमा उभिए। उनीहरू गोल्य पोष्टमा बस्ने साथीले भेट्टाए। उनका सबैको खुसीको लागि, बुलेली दीयाको परिवारले धेरै विपक्षीहरूको सामना गरेर र जितेर टूर्नामेन्ट जित्यो।
टुर्नामेन्ट पछि, शहरको फ्ल्यागशिप क्लब, प्लास्टिक Vall ae FC का एक नेता अन्तिम वित्सलबाट बोले दीआका अभिभावकहरूसँग वार्ता गर्न गए। सफल वार्ता पछि, उनका ठूला दाजुहरू (Harouna र Abou) ले पहिलो युवा करारमा हस्ताक्षर गरे। हाम्रो आफ्नै बोलेले केहि समय पछि पछ्यायो। तल चित्रित, उनले प्लास्टिकको भिल्ली एफसीमा भर्ना हुनु अघि आफ्नो समय लिए।
दिनको अन्तमा, केटाहरू प्रशिक्षणबाट फर्किए पछि, तिनीहरू प्रत्येकले उनीहरूको कारनामाहरूको बारेमा छलफल गरे। जबकि सबैले आफ्नो प्रदर्शनको बारे मीठो कुरा भने, बोउलेलाई बोल्न अनुमति थिएन। यसको कारण उनका दाजुहरूले महसुस गरेका थिए र थाहा छ उसले राम्रो प्रदर्शन गरेको छैन। उनलाई सँधै मौन राख्दा बोलेले एक पटक आफ्ना भाइहरूलाई भने;
तपाईं सबै कुनै दिन देख्नुहुनेछ। यदि त्यहाँ एक छ जो फुटबल मा सफल, यो म हुनेछ।
साँच्चै, त्यो जवान मानिस कहिल्यै झूट बोलेन। थोरैलाई कसैले थाहा थिएन कि उनी (वर्षौंको दौडान) मनपर्‍योमा सामेल हुनेछन् कलिडो कुलिबिले, एडुअर्ड मेन्डी र अनुहार बन्न अरूको एक पाहुना सेनेगल राष्ट्रिय टोलि।
फुटबलको माध्यमबाट, बोउले आफ्नो परिवारको एकमात्र रोटी खाने कामदार भए। दुःखको कुरा, उनका सबै ठूला दाजुहरू (Harouna, Abou र Diak) कहिले पनि पेशेवर संसारमा पुगेनन्। फुटबल उनीहरूको लागि समयको बर्बादी थियो तर बुउलीका लागि प्रेरणाको ठूलो स्रोत। हामी तपाईंलाई बताउनेछौं कि सेनेगालीले आफ्नो जीवन कहानीको अर्को खण्डमा कसरी सफलता हासिल गरे।
बुले दीया जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
परिवारका परिवारका सदस्यहरू आफ्ना ठूला दाइहरूको अवलोकनकर्ता भए। अवश्य पनि, उनले Harouna, Abou र Diak लाई आफ्नो रोल मोडेलको रूपमा लिन्छन्। उनीहरूले गरेका सबै कामहरू मध्ये, उनले मात्र राम्रो चित्रण गरे। बुलेली एक स्मार्ट बच्चा थियो जसले आफ्ना भाइहरूको क्यारियरलाई मार्ने गल्तीहरू देख्यो र त्यस्तो जोगिन सिक्यो। उ उसको दिमागको पछाडि उसको महत्वाकांक्षा राख्यो.
मिक्सिंग फैक्ट्री र एमेच्योर फुटबल:
रेम्समा विस्फोट हुनु भन्दा पहिले, बुलेट डिया विकल्पको खोजी गर्न पर्याप्त बुद्धिमानी थियो यदि फुटबल असफल भयो भने। किशोरावस्थामा उहाँ इलेक्ट्रिशियन बन्नुभयो। किशोरावस्थामा पनि, यो बुद्धिमान केटाले समय व्यवस्थापनको अवधारणा प्रयोग गर्‍यो। यो इलेक्ट्रिकल फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने र एमेच्योर फुटबल खेल्ने उसको तालिकामा देखियो।
असफल परीक्षणहरू र फुटबलमा छोड्ने विचार:
१२ मा, उसले सेन्ट-एटिएन्नेमा उसको हात राख्यो, तपाईं असफल हुनुभयो। ओलम्पिक लियोनाइसमा एक अपूर्ण परीक्षणहरू पछ्याइन्। आफ्नो परिवारको अनुमोदनका साथ, उनले les 12२ किलोमिटर यात्रा वेल्सको लागि गरे - Wrexham AFC मा परीक्षणको लागि, जुन हाम्रो अर्को विफलता भयो। जब उनले शौकिया फुटबल पास गर्न नसक्ने देखे, बुलेले खेल छोड्ने विचार गरे।
ठीक त्यस समयमा जब स्ट्राइकर आफ्नो बुटहरू झुण्ड्याउने कडामा थियो, उसका आमा बुबाको घनिष्ठ मित्र (नाम द्वारा; केटा Herbain) कठोर शब्दमा उनीसँग कुरा गरे। उसको शब्दमा;
“यो त्यस्तो मात्र समय हो जब कसैले मलाई नराम्रो कुरा गरिरहेको देखे। उसले मलाई भन्यो कि उसले मलाई एक मूर्खको रूपमा देख्यो, जसले मेरो वरिपरि मूर्खता मात्र राख्दछ, रोक्नको निम्ति होइन, यदि मैले मेरो जुत्ताहरू समात्छु भने।
मेरा भाइहरूले उनीहरूको सम्भाव्यता खेर फालेका थिए… र मैले छोडिदिएँ भने अब मेरो पालो आउनेछ "
बुले Dia बायो - सफलता कहानी:
उनको परिवारको अन्तिम सदस्यले हार मान्नु पर्ने कुरा सुने पछि, प्लास्टिक Vallée FC का सहायक कोचले हस्तक्षेप गरे। उनले बोलेलाई एक निश्चित-अवधि अनुबंधको प्रस्ताव गरे, जुन उसलाई फिटबलमा फिर्ता पुनः शुरू गर्‍यो।
अझै प्रो क्लबको अभावमा उनलाई पछि उसको परिवारबाट २० किलोमिटर टाढा जुरा सुदको आशा केन्द्रमा सम्मिलित हुन अनुमति दिइयो। तीन सत्रहरू पछि, दिया क्लबको वरिष्ठ टीम डेब्यूको लागि पहले नै बन्यो। उनले चैम्पियनाट नेश्नल २ (फ्रान्सेली लिग प्रणालीको चौथो तह) मा एक नम्र नोटमा शुरू गरे। २०१/20/२०१ season सिजनमा, दियाले २१ उपस्थितिमा १ goals गोल गरे।
अधिक उचाइमा सर्दै, उदाउँदो ताराले जुडा सुद फुटको साथ सफल डेब्यू सीजन पछि - १ July जुलाई २०१ St मा स्ट्याडे डि रेम्सको साथ एक पेशेवर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। उनले सिनियर टोलीका लागि पहिलो छनौट स्ट्राइकर बन्न जहाज अघि छवटा खेल मात्र खेलेका थिए।
२०१२-२०२० सिजन पछि, गोल स्कोरि machine मेसिनले पछाडि फर्केर हेरेन। शिकारी एक शानदार छलांग र एक दृढ मनोवृत्ति देखाएको छ। बोउले दियाको बायो लेख्ने क्रममा, ऊ फ्रान्सेली लिग १ मा उच्च गोल स्कोररको स्थानमा छ - मात्र किलियन एमपीपी अधिक स्कोर गर्दै। यो उपलब्धिले यूरोपभरि ठूला क्लबहरू बनायो र उनको हस्ताक्षरको लागि भीख माग्यो।
Butfootballclub वेबसाइट अनुसारOM को लक्ष्य, र प्रीमियर लिग क्लबहरूको एक होस्ट, Stade डी Reims बुलेट Dia बेच्न यसको घाँटी मुनि चाकू आवश्यक छैन। जुन कहिले पनि चीजहरू बाहिर जान्छन्, प्रशंसकहरू विश्वास गर्छन् उनी अगाडि टास्कमा छन्। परिवार को लागी, यो मिशन पूरा, प्रतिष्ठा स्थापित र गन्तव्य अन्तमा वितरित छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
बुले दीया गर्छ एक केटी प्रेमिका वा पत्नी हुन छ?
के तपाईं यहाँ प्रेममा सेनेगल स्ट्राइकरको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न हुनुहुन्छ? के तपाईंलाई बुलेली दीयाकी प्रेमिका को हो भनेर पत्ता लगाउने तीव्र इच्छा छ? हामी पनि त्यस्तै छौं। उसको बढ्दो लोकप्रियता र राम्रो दृश्यको साथ, यो निश्चित छ कि अगाडी महिला फ्यानहरूलाई आकर्षित गर्दछ जसले आफैंलाई पत्नी सामग्रीको रूपमा लिन्छन्।
Lifebogger निर्णायक भन्न सक्छ कि बुले Dia विवाहित छैन (२०२१ को शुरू मा जस्तै)। साथै उहाँसँग एक गर्लफ्रेंड हुन सक्छ जुन उसका आमा बुबाले आफ्ना बच्चाहरूको भावी आमाको रूपमा अनुमोदन गर्नुभयो। तर ऊ एक लेट बुमर हो भनेर विचार गर्दै, उसले वास्तवमा चमकदार म्यागजिनहरू जीवित पार्नु पर्छ। यस हड्तालले (जनवरी २०२१ मा) आफ्नो सम्बन्ध निजी बनाउन सबै माध्यम अपनाएको छ।
बुउले दीया व्यक्तिगत जीवन:
यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई स्ट्राइकरको व्यक्तित्व जान्न मद्दत गर्नेछौं - फुटबलबाट टाढा। सुरूवात गर्दै, ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसले आफू कहाँबाट आएको हो भनेर कहिल्यै बिर्सेन र हामीसँग यसको प्रमाण छ।
एक पटकको कुरा हो, बोले Dia GMC मा आफ्नो पूर्व कार्य साथीहरु भेट्न गयो। यो एक प्लास्टिक निर्माण र ट्रेडिंग प्लान्ट हो जहाँ उसले एक फुटबल सुपरस्टार बन्न अघि काम गर्‍यो।
त्यहाँ पुगेर उहाँ कम्पनीको मालिकलाई प्रत्यक्ष भेट्न जानु भन्दा पहिले सीधा आफ्ना पहिलेका सहकर्मीहरूलाई अभिवादन गर्न जानुभयो। यो होइन कि उनीहरूको झगडा थियो। यो उहाँको नम्रताको बारेमा मात्र कुरा हो।
त्यतिखेर कारखानामा, बोउली एक मोडेल कर्मचारी र एक वास्तविक कडा श्रमिक थियो। मानिस जसले उसलाई चिन्छ ऊ भन्दछ ऊ ऊ एकदम पाबन्द छ, उसको घण्टा गणना गर्दैन र सबै प्रकारका शिक्षासंग अनुकूल हुन सक्षम छ। काम गरिसकेपछि, उनले प्रशिक्षणको लागि आफ्नो सुनौलो खुट्टा लिन्छन् जहाँ उनले पेशेवर संसारको लागि तयारी गर्दछन्।
बोले दीआ जीवनशैली:
सरल र स्मार्ट हेर्नु भनेको केहि धेरै फुटबल प्रशंसक इच्छुक छ। सेनेगलको आफ्नै Dia कडा स्नीकर्सको साथ मिलेको सरल पोशाकको आफ्नो अद्भुत संग्रह मार्फत तिनीहरूमा सत्य रहन्छ। फुटबलको बाहिर, उहाँ सामान्य जीवनशैली बिताउनुहुन्छ र महँगो कारहरू, ठूला घरहरू, बज, केटीहरू, पार्टीहरू आदि द्वारा सजिलै देख्न सकिँदैन।
२ 24 वर्षको उमेरमा बोउलेसँग आधुनिक पुस्ताका शौकहरू छन्। धेरै ताराहरू जस्तै, उसले भिडियो गेम खेल्न मन पराउछ र एनबीए हेर्ने फ्यानसीलाई।
बुले दीया नेट वर्थ:
उसको वरिष्ठ क्यारियरलाई केवल २२ मा शुरू गरिएको विचारमा, उसको गैर-वित्तीय र वित्तीय सम्पत्तिहरूको मूल्य तौल गर्न एकदम सजिलो छ - विशेष गरी हामी स्ट्याड डी रेम्समा उसको तलब जान्दछौं। २०२१ को सुरूमा बोउले दियाको सम्पत्ति 22 2021,००० युरो छ। हामीले वरिपरि द्रुत-बढ्दो स्थानान्तरण अनुमानहरूको ट्याबहरू राख्ने बित्तिकै यो संख्या बढ्नको लागि सेट गरिएको छ।
बुउले दीया पारिवारिक जीवन:
अहिले, हामी सबैलाई थाहा छ कि गोल स्कोरिंग मसिing कुनै धनी मानिसका छोरा होइन र आफ्नो बेक र कलमा चीजहरू पनि पाउँदैनन्। बुलेट एक अल्ट्रा-युनाइटेड सेनेगाली परिवारबाट आएका हुन्। यो खण्डमा हामी तपाईलाई उसको परिवारको बारेमा के थाहा दिन्छौं बताउँछौं।
बुउले दीआका अभिभावकको बारेमा:
सुरुबाट, उनीहरूको दृष्टिकोण थियो कि तिनीहरूका छोराहरूले कम से कम कुनै चीजमा समात्छन् (फुटबल होईन) तपाईं थोरै पदार्थको पनि - जसले तिनीहरूलाई जीवन बाँच्न मद्दत गर्दछ। यसै कारणले बोले दीआ १ eigh वर्षको उमेरमा बिजुलीमा एक पेशेवर स्नातकको धारक भयो। यदि फुटबलले काम नगरेको भए उसले जीवन बचाउने थियो।
IGFM सेनेगलका अनुसार, बुले दीयाकी आमाले कहिल्यै काम गरेनन् र उनको बुबाले स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो जसले उसलाई फुटबलर बन्नबाट रोकेको थियो। उसको लागि फुटबलबाट अवकासको सामना गर्न गाह्रो थियो। निस्सन्देह, बुबा चार उनका अन्तिम जन्मेका छोराले आफ्नो खेलकुद सपनाहरू पाउँदा खुसी हुनेछन्।
बुले दीया ब्रदर्सको बारेमा:
सेनेगलका लागि अगाडि खेल्ने पेशेवर फुटबलर टेस्टोस्टेरोनको घरबाट आउँदछन्। तपाईं फुटबलर बन्ने सपनामा पनि टाँसिरहनुभयो, त्यहाँ असफल क्यारियर भएकोमा कुनै पश्चाताप छैन किनकि ती मध्ये एकले (उनीहरूको कान्छो) यो बनाए।
उनका ठूला व्यक्तिहरू मध्ये एक बोउले दियाका ब्रदर्ससँगको अन्तर्वार्तामा, अबू दिआले एक पटक भनेका थिए;
“हामी थोरै भएकोले हामीले एकअर्कालाई वचन दिएका छौं जुन भाइहरूबीच हुनुपर्ने हो। त्यो प्रेम हो!
हामी कठिनाइको बीचमा छौं, म सबै कुरा भन्न सक्दिन। हामी जहिले पनि आफ्नो सानो बनाउनेको लागि त्यहाँ हुन्छौं, "
आफ्नो जेबमा इलेक्ट्रिशियनको रूपमा ब्याकलेराएट भएको एक पेशेवर फुटबलरको रूपमा, बुले दीया आफ्ना भाइहरू, आमाबुबा, काका, बुआ र ओयोनाक्स र सेनेगलमा बस्ने अन्य आफन्तहरूको हेरचाह गर्दछन्।
बुउले दीया अनटोल्ड तथ्य:
हाम्रो कथा र अगाडिको शानदार गन्तव्यमा राउन्ड गर्दै, हामी तपाईंलाई केही सत्य प्रस्तुत गर्दछौं जुन तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ।
तथ्य # 1 - तलब ब्रेकडाउन र प्रति सेकेन्डको आय:
पश्चिम अफ्रिकी सीएफए (SAY-fuh) फ्रैंक मा आय।
प्रति वर्ष € 572,880 CFA 376,267,488 XNUMX,२XNUMX।
प्रति महिना € 47,740 CFA 31,355,624 XNUMX,२XNUMX।
प्रति हप्ता € 11,000 CFA 7,224,798 XNUMX,२XNUMX।
प्रति दिन € 1,571 CFA 1,032,114 XNUMX,२XNUMX।
प्रति घण्टा € 65 CFA 43,005 XNUMX,२XNUMX।
प्रति मिनेट € 1 CFA 717 XNUMX,२XNUMX।
प्रति सेकेन्ड € 0.01 CFA 11.9 XNUMX,२XNUMX।
तपाईंले बुलेट Dia हेर्न सुरु गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… औसत सेनेगालिस जसले १०२,102,686 सीएफए / महिना कमाउँछ उसले सीएफए १,०10२,१1,032,114 make बनाउन एक ठूलो १० बर्षको लागि काम गर्नु पर्छ। Stlay de Reims को साथ बुलेय दीयाले दिन कमाउँछन्।
हाम्रो समय बोउले दियाको जीवन कहानी पढ्नका लागि धेरै धन्यबाद। हाम्रो अनुसन्धानको क्रममा हामीले पत्ता लगायौं कि उहाँको जीवनी शब्द - होप भन्ने बारेमा अनौंठो पाठ छ। किनभने Boylaye जस्तै लाग्यो Sadio मनी, उहाँ आफ्नो बाटो मा आयो जो सबै अन्धकार बीचमा प्रकाश हेर्न सक्षम थियो। म उसको बायो लेख्ने क्रममा ऊ बन्यो लिग १ मा बनेको गहना.
भूतपूर्व इलेक्ट्रीशियनले आफ्ना भाइहरू - हरुना, अबू र दीकका लागि यदि होईन भने सफलता देखेका छैनन्। आफ्नो क्यारियर छोड्ने बावजुद, केटाहरूले Boylaye को लागी एक बाटो बनाए। एक बुद्धिमान केटाको रूपमा, उनले आफ्ना भाइहरूको गल्तीबाट सिके, आफ्नो अवसरहरू लिए र कारखानाको काम र शौकिया फुटबलको माथि बढ्यो। असफल क्यारियरको सामना गर्न उनका बुबा - बुबा - मध्ये एकलाई गाह्रो थियो। धन्यबाद, उनका अन्तिम छोराले आफ्नो पुरानो सपना पुनर्स्थापित गर्नुभयो।
Lifebogger मा हामी हाम्रो बायोग्राफिक सामग्रीको शुद्धताको ख्याल राख्छौं। यदि तपाईं केहि भेट्टाउनुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिँदैन भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अन्यथा, सेनेगाली परिवार मूलको फ्रेन्च जीनियसको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ हामीलाई बताउनुहोस्। अन्त्यमा, बोले Dia को बायोमा सारांश भ्रमण प्राप्त गर्न, हाम्रो Wiki तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरा नाम: बुउले दीया
जन्म मिति: 16th नोभेम्बर, 1996।
जन्मस्थान: ओयोनाक्स, फ्रान्स।
अभिभावक: श्री र श्रीमती Dia।
भाइहरू: Harouna, Abou र Diak।
परिवार जरा: सेनेगल।
फिटमा उचाई: Fe इन्च।
मीटरमा उचाई: 1.80 m
एजेन्ट: फ्रेडरिक गुएरा।
नेट मूल्य: 750,000०,००० यूरो (२०२१ तथ्या .्क)